I-SPYV003 -Irekhodi yeRekhodi yeLizwi ye-OMG, Rekhoda i-280 hrs, ibhetri ye-15 yeeyure, 16GB-isisombululo se-OMG
I-SPYV003-IRekhodi yeLizwi ye-OMG yedijithali, Rekhoda i-280 hrs, iBhetri ye-15 yeeyure, 16GB
1. Yilula ukuyisebenzisa kwaye ifihle i-280 iiyure zokurekhoda ezilalelwayo
Ilizwi lethu elitsha liqalise ukuqhubela i-flash drive enokugqiba kakuhle. Kuyinto elula kakhulu ukuyisebenzisa, Yenza islayiti nje kwicala ukuqala ukurekhoda. Iphela irekhodi xa ithola i-audio kwaye iyeka ukurekhoda xa kungekho myalezo.
Irekhoda kwi-CD ye-Quality Quality nge-nitrate ye-192kbps, ekunika ukurekhoda okucacileyo kunye nokucacileyo xa kuthelekiswa nabanye kwiimarike.
Ukongeza kwimizuzu yebhetri ye-15 yeyona bhokisi yeyona nto iyayibhalwa xa ixhunyiwe.
2. Indlela yokusebenza yezwi
Leyunithi ithatha ukurekhodwa komculo ophezulu, nangona ixhaswe ukuba ihlawule. Isici sokusebenza sezwi likuvumela ukuba ugweme iiyure ezinde zokurekhoda ngaphandle kwaye ulondoloze ubomi bhetri.
3. Ephathekayo kwaye kulula ukuyisebenzisa
Ukurekhoda usebenzisa okwakhiwe kwi-battery ye-15 yeyure okanye xa utyunjwe kwishaja yodonga.
Unokurekhoda ngexesha utyunjwe kwi-USB Wall Charger
CD Ukurekhoda kweMpilo
I-MAC kunye nePC ziyahambelana
Ixesha lokurekhoda: iiyure 280
ubomi bebhetri: iiyure 15
Imodi yokurekhoda ye-SHQ, Ukurekhoda kwinqanaba elincane: 128 Kbps
Ifomathi yefayile: Wav
Ifom yeDrayivu: XTUMX yeFat
Iindlela zokusebenza: Windows 2000 / XP / Vista / 7 / 8, Mac, Linux
Umsebenzi wediski we-USB
Yobungakanani: 64mm × 22mm × 10mm
ubunzima: malunga ne14g
1 x VAUSB4GB / WC Ukurekhoda iDivayisi
1 x Ishaja seWindows USB
1 x Incwadana yokufundisa
6582 Ubutyebi Bonke Imibukiso ye-1 Namhlanje